Idyasi yebhayisekile engenasilinganiselo yamanenekazi
Iidyasi kunye neebhatyi
Esi sisinxibo, isambatho samanenekazi esingaqhelekanga esenziwe ngezinto ezi-fiber ezibalaseleyo ze-PU zokwenziwa. Isikhumba sokwenziwa se-Ultrafine PU sisizukulwana sesithathu sesikhumba esenziwe ngumntu nesenziwe ngumntu. Ilaphu elingalukwanga lobume balo obunemilinganiselo emithathu kunye nemesile lenza imeko yesikhumba esenziwe ngokudlula kwisikhumba sendalo kwizixhobo ezisisiseko. Imveliso edityaniswe ne-PU slurry impregnation esandula kuphuhliswa ngesakhiwo sokuvula kunye netekhnoloji yokuqhubekeka yomaleko wekhompiyutha, kudlalwa microf ...
Esi sisinxibo, isambatho samanenekazi esingaqhelekanga esenziwe ngezinto ezi-fiber ezibalaseleyo ze-PU zokwenziwa. Isikhumba sokwenziwa se-Ultrafine PU sisizukulwana sesithathu sesikhumba esenziwe ngumntu nesenziwe ngumntu. Ilaphu elingalukwanga lobume balo obunemilinganiselo emithathu kunye nemesile lenza imeko yesikhumba esenziwe ngokudlula kwisikhumba sendalo kwizixhobo ezisisiseko. Imveliso edityaniswe nokufakwa kokutyalwa kwe-PU slurry kunye nesakhiwo sokuvula kunye nobuchwephesha bokuqhubekeka kongqameko lwekhompawundi, kudlalwe indawo enkulu yomphezulu kunye nembibition eyomeleleyo yamanzi. Oku kuyenzile ibakala elihle kakhulu le-PU lesikhumba elenziweyo linobuchwephesha obuhle kakhulu bokuba i-collagen fiber efanelekileyo yesikhumba yendalo. Ke akunamsebenzi kulwakhiwo lwangaphakathi, okanye ukubonakala kokugawulwa kunye neepropathi zomzimba kunye nabantu abanxibe intuthuzelo, njl njl. Ukongeza, isikhumba se-fiber esenziwe kakuhle sigqwesa isikhumba sendalo ngokuchasene neekhemikhali, ukufana komgangatho, ukuziqhelanisa nemveliso enkulu kunye nokungena manzi, ukungqinisisa ukungunda kunye nezinye izinto. Enye into, ukusebenza ngokugqwesileyo kwesikhumba sokwenziwa akunakubekwa endaweni yesikhumba sendalo. Sihlalutya ukusuka kurhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe, izinto zokwenziwa ze-PU zithathe indawo yesikhumba sendalo esingenazibonelelo zininzi. Ukusetyenziswa kwesikhumba esenziwe ngumntu kunye nesikhumba sokwenziwa kweebhegi, impahla, izihlangu, izithuthi kunye nokuhonjiswa kwefanitshala kuye kwaziwa kakhulu yimarike. Uluhlu olubanzi lwesicelo, inani elikhulu, ezahlukeneyo zesintu njalo njalo zizikhumba zendalo azinakufezekisa.
Le bhatyi ye-PU, ilula kwaye inesitayile esinama-lapel asymmetric kunye nokuthungwa okukhethekileyo emagxeni nasesihlahleni. Ipateni yonke intle kuguqulelo oluhlanganisiweyo kwaye ayophuli ubuhle obuhle. Kuyatshiwo ukuba abafazi bonke benziwe ngamanzi, yindlela efanelekileyo yokusebenzisa ukuthamba ukoyisa ukungangqinelani. Iziphu zangaphambili kunye nezinye izinto ezikwi-matte kunye nemibala yompu we-retro ukwenza yonke ilokhwe ibonakale ikumgangatho ophezulu kwaye intle. Kukho ulwelo ngaphakathi. Inokugcwaliswa ngokudibeneyo ngokungekho ngokwemfuno yakho. Izinto eziphathekayo zithambile, zixineke kakhulu ipholiyesta yelaphu. Iyaphefumla kwaye intofontofo. Omabini amacala omzimba ayipokotho elula. Ilula kodwa hayi mfutshane. Uyilo olupheleleyo lwengubo ilula kodwa inhle, ngokuthunga ngokukodwa kwikhafu kunye negxalaba elongeza imfashini. Ingathathwa njengesinxibo esinemfashini esixabisekileyo.
Egqithileyo Idyasi yebhayisekile yeLadies
Okulandelayo: Ladies Biker ibhatyi PU
Ibhatyi engangenwa ngumoya
Ngaphezulu kweLadies Biker Jacket
Iifashoni yeLadies Miniskirt
Ladies Biker ibhatyi PU
Idyasi yebhayisekile yeLadies